Izindaba - Ngabe ukuchelela nge-drip kungcono kunama-sprinkler
Ukuchelela nge-Sprinkler, okungukuthi, ukunisela ngenkasa, kuyindlela ethuthukile yokunisela esebenzisa isethi yemishini ekhethekile yokufafaza amanzi ngaphansi kwengcindezi emoyeni, kwakheke amaconsi amancane, njengemvula, afuthwe ngokulinganayo emhlabeni olinyiwe, nendlela ethuthukisiwe yokunisela phakela izitshalo ngamanzi.
Kodwa-ke, ukuchelela nge-sprinkler nakho kunemikhawulo ethile: Ithinteka kakhulu ngumoya, futhi amaconsi amanzi afafazelwe kufanele afuthwe aye endaweni ethile ephakeme ngaphambi kokuba awe. Umzila wayo uthinteka kakhulu emoyeni, oguqula ukwabiwa kwamanzi endizeni futhi uthinte ukufana kokufafaza; Lapho isivinini somoya siphezulu futhi nomswakamo womoya uphansi, ukulahleka kokukhukhuka nokuhwamuka kuyoba kukhulu, kwesinye isikhathi kuze kufike ku-10 % -30% wamanzi okunisela.
Ukuchelela ngenkasa isebenza kahle kakhulu ekunikezeni amalitha amanzi amane kuya kwehora ngqo enhlabathini. Ubuhle beukuchelela ngenkasa phezu abafafazayo ukuthi kuncane ukulahleka kwamanzi ngenxa yokuhwamuka noma ukugeleza.
Ukuchelela ngenkasa uhlelo lokunisela olusebenza kahle kakhulu nolufanele. Esikhundleni sokumanzi yonke insimu, amanzi asetshenziswa kuphela endaweni yezimpande zezitshalo. Umgomo oyinhloko we ukuchelela ngenkasa ukufaka amanzi ngesikhathi lapho izitshalo zidinga kakhulu futhi ngamanani adingekayo ekukhuleni okufanele kwezitshalo.
Ukuvuza Irrigation kungasetshenziswa kabanzi ensimini izitshalo ahlukahlukene, ingadi yezithelo, greenhouse, epulazini, ingadi njll
Qhathanisa nolunye uhlobo lokunisela, kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa i-Drip Irrigation:
1. Ukonga amanzi, ukonga amandla, ukonga umanyolo, ukonga abasebenzi, ukufaka umanyolo kulula, kuyindawo ekahle yokusekela izithelo nemifino esezingeni eliphezulu ngaphandle kokungcola;
2. Lawula izinga lokushisa komhlaba kanye nomswakama ukunciphisa ukulimala kwezilokazane;
3. Gcina ukwakheka kwenhlabathi, uvimbele ukubumbana kwenhlabathi, futhi ube nomphumela wokukhipha usawoti;
4. Isivuno sikhula ngamandla, usayizi wezithelo ulingana, kanti isithelo siya emakethe ngaphambi kwesikhathi. Okukhiphayo kukhuphuke ngaphezu kuka-35%, kwenyusa imali engenayo yezomnotho yabalimi.
Isikhathi Iposi: May-31-2021